Wararkii ugu dambeeyey Ruushka oo ka baxay goob istaraatiiji ah oo ku taal Ukraine - Caasimada Online
Home Dunida Wararkii ugu dambeeyey Ruushka oo ka baxay goob istaraatiiji ah oo ku...
Wararkii ugu dambeeyey Ruushka oo ka baxay goob istaraatiiji ah oo ku taal Ukraine
Kyiv (Caasimada Online) – Ciidamada Ruushka ayaa u muuqda inay ka niyad jabeen dagaalkii ay ku qaadeen Dalka Ukraine kaasoo ay kasoo hor jeesteen inta badan dowladaha Adduunka
Ciidamada Ruushka ayaa lagu soo waramayaa in ay isaga baxeen garoonka diyaaradaha ee Hostomel oo ku dhow caasimadda Ukraine, kaas oo tan iyo markii uu bilowday dagaalka uu ka socday dagaal, sida ay sheegeen sirdoonka militariga UK.
“Ciidamada Ukraine waxay sii wadaan inay iska caabiyaan ciidamada Ruushka lagana saaro agagaarka Kyiv,” Wasaaradda Difaaca UK ayaa sidaas ku sheegtay warbixin ay soo saartay subaxnimadii hore ee Sabtida.
“Dhinaca bari, Ukraine waxay dib u qabsatay dhowr tuulo. Ciidamada Ukraine waxay xaqiijiyeen inay la wareegeen waddo muhiim ah oo ku taal bariga Kharkiv ka dib dagaal culus,” ayay wasaaraddu ku dartay.
Garoonka Hostomel waxa uu dagaal ba’an ku dhexmaray ciidamada labada dal tan iyo 24-kii Febraayo, markaasoo ciidamada cirka ee Ruushka ay ku yimaadeen diyaarad helikobter ah si ay ula wareegaan garoon diyaaradeed oo ah buundo.
Ruushka ayaa cadaadis xoog leh kala kulmay Dowlado badan, waxaana lagu soo rogay cunaqabateyn dhinac walba taasoo daciifisay dowladiisa Militari.